Inona no hatao raha mijaly amin'ny bruxism ny zaza | Bezzia
Inona no hatao raha voan'ny bruxism ilay zaza
Maria Jose Roldan | 25/09/2021 11:06 | Nohavaozina amin'ny 25/09/2021 11:09 | RENY
Raha tsikaritrao fa mihifikifina ny zanakao rehefa matory, tena azo atao ny mijaly amin'ny aretina antsoina hoe bruxism. Izy io dia aretina mahazatra kokoa noho ny azonao an-tsaina, misy fiatraikany amin'ny ampahefatry ny fiarahamonina. Amin'ny voalohany dia tsy misy tokony hatahorana, satria manjavona matetika ny bruxism rehefa mivoaka miaraka amin'ny nify maharitra ilay zaza.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia holazainay aminao bebe kokoa ny momba ny bruxism sy inona ny vokatr'izany eo amin'ny sehatry ny fahasalaman'ny zaza am-bava?
1 Inona no atao hoe bruxism?
2 Antony iraisana amin'ny bruxism
3 Ahoana no hitsaboana bruxism
Inona no atao hoe bruxism?
Ny bruxism dia aretina iray misy fiatraikany amin'ny hozatry ny vava ary misy fihenan-danja be loatra amin'ireny, mitabataba mafy. Ny bruxism dia mety miteraka aretin'andoha, valanoranony, na fanaintainan'ny sofina. Misy karazany roa na karazana bruxism:
Fantatra amin'ny anarana hoe centric, izay misy clenching ny nify mafy noho ny mahazatra. Mety hitranga na amin'ny antoandro na amin'ny alina.
Ny eccentric dia miteraka fikolokoloana nify ary matetika amin'ny alina no mitranga izany.
Marihina fa ny bruxism dia mahazatra sy mahazatra raha miforona ny nify. Amin'ny ankapobeny, Matetika dia manjavona io aretina io aorian'ny fitsaboana nify maharitra ataon'ny zaza.
Antony iraisana amin'ny bruxism
Ny bruxism dia mety vokatry ny antony ara-batana na ara-tsaina.
Raha misy antony ara-psikolojika io dia miseho ny bruxism noho ny fihenjanana be loatra amin'ny fiainan'ny zaza na noho ny fiasan-doha lehibe.
Ny antony dia mety ara-batana ihany koa, toy ny fisehoan'ny nify vaovao na ny tsy fahaizany mijoro. Midika izany fa afaka mihidy vazana izy ireo rehefa matory ilay zaza.
Ahoana no hitsaboana bruxism
Araka ny efa noresahintsika etsy ambony, amin'ny ankamaroan'ny tranga, Matetika mandeha irery ny bruxism. Ny fitsaboana dia manan-kery raha tsy izany dia tsy manjavona ary miteraka fanaintainana mafy amin'ny nify na fanaintainana mafy ao aminy.
Raha mbola kely loatra ilay zaza dia apetraho eo amin'ny faritra ambony ny takelaka plastika ary araraoty ny areti-nify tsy ho voa mafy. Raha nandritra ny taona maro dia tsy nanjavona ny bruxism, ilaina ny manomboka fitsaboana orthodontic na orthopedic.
Raha hita fa antony ara-psikolojika ny bruxism, tsara ny mampiasa fepetra fialan-tsasatra isan-karazany amin'ny zaza mba hampihenana ny haavon'ny adin-tsaina na ny tebiteby araka izay tratra. Raha misy antony ara-batana dia asaina manomboka fitsaboana miorina amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana izay manampy amin'ny fanalefahana ny hozatry ny vava.
Raha fintinina, aza manahy be loatra raha mihidy vazana ny zanakao rehefa matory. Ny ray aman-dreny dia tokony hitandrina ny amin'ny fivoaran'ny aretina toy izany raha toa ka miharatsy ny raharaha. Mba hanalefahana an'io bruxism io dia tsara ny manaraka andianà fahazarana miala sasatra izay manampy ny zaza ho tonga tony amin'ny fotoana hatoriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Inona no hatao raha voan'ny bruxism ilay zaza
Fantatrao ve ny aretina taolana mahazatra indrindra?
Torohevitra hampihenana ny dian-tongan'ny karbôna eto amintsika